Iilayisensi zezemfundo ze-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoCAD zemvume zeMfundo
I-AutoCAD zemvume zeMfundo
Siyazi ukuba umfundi oqhuba umsebenzi weyunivesithi akanakho amaziko amaninzi kwi $ 2,000 leyo i ngaquka iphepha-mvume lokuthengisa kwi-AutoCAD. Siyazi kananjalo ukuba imeko eqhelekileyo ibikukungabikho semthethweni.
Kwezinye iisetingi, ubuqhetseba busathathelwa ingqalelo njengobuqhophololo obuxabisekileyo. Kodwa kancinci kancinci kuye kwawela kwisizathu sokuba, abafundi abafanayo, xa bephumelela, bebengayi kufuna ukuba umntu ebe ilungelo lobunikazi lomsebenzi oxabise ixesha, umzamo kunye nemali. Ngaphakathi ezantsi, ubuqhetseba ngumkhwa ombi onikwa ubuchwephesha ekufuneka sibuxele.
Kulungile sityale i-600 yeedola kwikhompyuter, ngaphandle kokucinga malunga nokhetho lokuba kwilebhu okanye kulowo ufunda naye. Kwangokunjalo, ukuziqhelanisa nokutyala imali kwisoftware kufanele ukuba yinxalenye yokuba ngabantu abanoxanduva abanqwenela ukuphumelela njengeengcali.
Ngesi sizathu, iilayisensi zemfundo ziyavela, ezizizinguqulelo ezipheleleyo kodwa ngamaxabiso asezantsi kakhulu kwaye okwexeshana. Zihlala zinyanga ezingama-61, eli lixesha eliqikelelweyo lokuba ikhondo lomsebenzi lihlale ngaphandle kokonwabisa abantwana okanye imisebenzi engaphandle.
Iivenkile ezithengisa ezi layisenisi zigunyazisiwe yi-AutoDesk, kufuneka xa ubhalisela ukungqina ukuba ungumfundi weDyunivesithi okanye iKholeji kwaye ufunda ubuncinci isifundo esinye seeyunithi zexabiso ezi-3. Ukwenza oku, khangela nje ikhadi kunye nefom yobhaliso lolawulo ngexesha lokuthenga.
Ukuthenga kungenziwa ngekhadi lesikweletu okanye i-Paypal kwaye ukuthumela akubizi kakhulu kuba kuyisofthiwe.
Ziyahluka ngohlobo lwenkqubo, ngokubanzi zijikeleze i- $ 148, kwiminyaka emi-5 ye-AutoCAD okanye ilayisensi yokuHlaziya. Kukwakho nabafundi abasisigxina, banokubakho mva kwilayisensi yezorhwebo, njengoko bekunokwenzeka xa umfundi ephumelele, ebeka inkampani yakhe kwaye ethande ukunqanda isohlwayo ngaphambi kophicotho-zincwadi lwesoftware oluqhelekileyo ngoku.
Ukuziqhelanisa, iilayisensi zemfundo zezinye ezamkelekileyo ezinokufunwa ngabafundi bobabini, abafundisi kunye namaziko oqeqesho. Kukho iilayisenisi ezinje ngezi zamaziko angenzi nzuzo.
Apho ukuzithenga khona
Omnye walaba basasazisi yiStudica, ekhoyo kwi-1985 kwaye ngaphandle kwe-AutoDesk nayo isasaza ilayisenisi zemfundo ze-SolidWorks, i-CadSoft kunye ne-Sketchup Pro.
Isoftware yeAustodesk yezifundo
Itafile yokuthelekisa ye-60 Iipetroli ezipheleleyo
Ubunjineli, i-GIS kunye noLawulo lweNgingqi: Iikhosi ezikufutshane
Ukwazi njani ixesha elingakanani elishiye ukusebenzisa ilayisenisi yamahhala endisebenzisayo?
Iklasi lezentando yesininzi kufuneka lisondele kummi, kungekhona kuphela kwimpumelelo yalo, kodwa nakwizakhono. Uphuhliso olunjengezo ze-gvSIG zi landela lo mgca, esiyikulibala inxalenye yoshishino. Andikwazi ukukwazi ukusebenza kwi-SME yam nge-ArcGIS kunye ne-AutoCAD, makungabikho kuphela ukuhlaziya ilayisenisi. Sidinga ukukhutshwa kweefayili. Amaxabiso eemveliso ezinjenge-ArcGIS (ukungabinakhulisa izandiso) kunye ne-AutoCAD zigqithiseleyo. Kutheni afundanga kwamanye amaqhosha asekhompyutheni aseMelika?
Ewe, kukho imithombo evulekileyo yomthombo
Uthe! I-500 euro iyakufanelekela ikhompyutha. Ixabiso le-GIS alivumelekanga
Iingqungquthela zaseGuatemalan Surveying Congress